နူးညံ့။ အချဉ်ရှိသောပြောင်းဖူးမှိတ်ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့် မီးဖိုချောင်သုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ဒါကအိမ်မှာသုံးတဲ့ရေမြှုပ်ကိတ်မုန့်ပါ။ မွန်းလွဲပိုင်းအလယ်၌ကော်ဖီတစ်ခွက်သို့မဟုတ်ချောကလက်ပူတစ်ခွက်နှင့်အတူဤ ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိတ်မုန့် ဒါဟာအကြွင်းမဲ့အာဏာမွေ့လျော်သည်။ သူဟာချောကလက်အနည်းငယ်ကိုအလှအပအတွက်သာမကအလှအပအတွက်ပါတန်ဆာဆင်ထားပါတယ်။ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အရသာရှိသော texture နှင့်ဤကိတ်မုန့်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာသည်မည်သည့်အပိုပစ္စည်းများမျှမလိုအပ်ပါ။
ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိတ်မုန့်သည်အခြေခံကျသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည် သံပုရာဒိန်ချဉ်မတူညီသောရနံ့နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထည့်နိုင်သည်။ လုပ်ရလွယ်ကူတယ်၊ အစားအစာပရိုဆက်ဆာနှင့်မီးဖိုအလုပ်အများစုလုပ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ် ဦး မှတိုင်းတာနေကြသည် 20 စင်တီမီတာမှို။ နံရံအမြင့်၊ ကိတ်မုန့်အရမ်းများပုံရသည်ဆိုပါကမကြောက်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်နူးညံ့နေဆဲဖြစ်သော ၃ ရက်ကြာမည်မဟုတ်ပါ။
၁၂၅ ဂရမ်။ အခန်းအပူချိန်မှာထောပတ်
3 XL ကြက်ဥ
၁၅၀ ဂရမ်။ ပြောင်းဖူး
150 ဂရမ်။ မုန့်ညက်မုန့်ညက်
အမှုန့်ဖုတ်3အဆင့်ကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်း
60 ml ။ နို့
ချောကလက်တစ်ဝက်ဝက် ၇၀% အရည်ကျိုသည် (အလှဆင်ရန်)
ကျနော်တို့190ºဖို့မီးဖို preheat ။
ကျနော်တို့ထောပတ်ကိုရိုက်တယ် အခန်းအပူချိန်တွင်အဖြူရောင်နှင့် fluffy အရောအနှောများရရှိသည်အထိနည်းနည်းသကြားထည့်ပါ။
ကျနော်တို့အနှစ်ထည့်ပါ တစ် ဦး ချင်းစီကကျနော်တို့ရိုက်နှက်စောင့်ရှောက်။
ငါတို့ရောနှော မုန့်ညက်ဆန်ခါပြောင်းဖူးနှင့်တဆေး။ ထောပတ်အရောအနှောကိုနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါ၊ အနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ရိုက်နှက်။ နို့နှင့်ပြောင်းပါ။
သီးခြားကွန်တိန်နာထဲမှာငါတို့စုဝေး ဆီးနှင်း၏အချက်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆားတစ် ဦး ဖြစ်တော့နှင့်အတူ။ သူတို့ကိုကိတ်မုန့်ထုပ်ထဲထည့်ပြီး pastry language ကိုသုံးပြီးပတ် ၀ န်းကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ 20 စင်တီမီတာမှိုအမဲဆီ။ နှင့် greaseproof စက္ကူနှင့်အတူခြေရင်းတန်း။ ငါတို့မုန့်စိမ်းကိုငါသွန်းလောင်း ကျနော်တို့မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ တစ် ဦး spatula နှင့်အတူ။ မုန့်စိမ်းဆက်တည်ရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ခွင်တွင်မှိုကို ၃-၄ ကြိမ်လောက်ရိုက်သည်။
ကျနော်တို့ 190 ဒီဂရီမှ preheated မီးဖို၌ထားနှင့် ကျနော်တို့ 45-60 မိနစ်ဖုတ် အချိန်ကာလများသည်ခန့်မှန်းခြေမီးဖိုတစ်ခုစီပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကိတ်မုန့်ရဲ့အလယ်ကိုတုတ်နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်သန့်ရှင်းလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
, နွေးပါစေနှင့်မီးဖိုကနေ Remove တစ် ဦး ထိန်သိမ်းအပေါ် unmold.
အေးတဲ့အခါငါတို့နဲ့အတူအပါအ ၀ င် ချောကလက်မျှင် သွန်းသော.
အချို့ကိုလည်းအလှဆင်နိုင်သည် သကြားလုံးအသီးများ သို့မဟုတ်သစ်သီးခြောက်များကဲ့သို့သော walnuts သို့မဟုတ် sliced ​​almond ။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီမုန့်စိမ်းတွင်ပါဝင်သောအရာများကိုထည့်သွင်းရမည်။
မင်းကပိုလိုချင်ရင်ငါတို့ကြိုးစားတာကိုမရပ်ပါနဲ့ ဒိန်ချဉ်မပါဘဲကိတ်မုန့် အရာလည်းအရသာသည်နှင့်ပြင်ဆင်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ချက်ပြုတ်ချိန် 50 မိနစ်
စုစုပေါင်းအချိန် 1 နာရီနှင့်မိနစ် 10
ဝတ်ပြုနှုန်း Kilocalories 400
DIY၊ လက်မှုပညာ၊ လက်မှုပညာနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအထူးသင်ခန်းစာများနှင့်ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများရေးသားသူနှင့်အယ်ဒီတာ ... ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်ရန်>
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » အချိုပွဲ » ပြောင်းဖူးကိတ်မုန့်အရသာ!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဘီစကွတ်မုန့်ကိုကြိုက်သည်။ ၎င်းကိုမုန့်သို့မဟုတ် buttercrem ဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်